प्राथमिकतामा नपरेको पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम : RajdhaniDaily.com -
Home बिचार प्राथमिकतामा नपरेको पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम
नेपालमा कारोना निको भएको अर्थात् रिर्पाेट नेगेटिभ आएको निमोनिया भएको भए चार साता र नभएको भए तीन सातासम्ममा सामान्य बन्न सक्ने चिकित्सकहरूले भन्दै गरेका भए पनि महिनांै थकान, कमजोरी र सासमा समस्या भएका बिरामीहरू आज पनि टेकु अस्पतालमा देखाउन फलोअपमा आइरहेका छन् । रोग तथा भाइरस नयाँ भएकाले कसैले यस्तै, यति दिनमा भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।
दीर्घ कोभिड : कोरोना संक्रमण कतिपयलाई पाचदेखि सात दिनमै निको हुन्छ भने कतिलाई अलि लामो समय लाग्ने गरेको छ । कतिपय निको अर्थात् कोरोनाको पीसीआर रिर्पाेट नेगेटिभ आएर पनि महिनौसम्म संक्रमणकै बेलामा जस्तो लक्षण र असरबाट पीडित भइरहन्छन्, जसलाई खोजकर्ताहरू लङ कोभिड अर्थात् दीर्घ कोभिड भन्दछन् ।
लन्डनस्थित किंग्स कलेजले प्रकाशित एक अध्ययन प्रतिवेदनमा निको भएका संक्रमितहरूमा कोरोना संक्रमण भएको पहिलो सातामा पाँच वटाभन्दा बढी लक्षण देखिएमा दीर्घ कोभिड लाग्ने खतरा हुने उल्लेख छ । संक्रमणको पहिलो साता बिरामीलाई यदि थकाई महसुस, टाउको दुख्ने, श्वास लिन कठिन÷गाह्रो, आवाज गह्रौं, मांसपेसी तथा शरीर दुख्नेजस्ता लक्षण देखिए उसलाई दीर्घ कोभिड हुने संकेत मान्न सकिन्छ । संक्रमण भएको चारदेखि आठ सातासम्म पनि पूर्ण रूपमा निको भएन भने उसलाई दीर्घ कोभिड हुने जोखिम बढ्छ । पीसीआर रिर्पाेट नेगेटिभ आइसक्दा पनि रुघा, खोकी, सास लिन गाह्रो, मांसपेसी दुख्ने र धेरै थकाइ लाग्नेजस्ता समस्या भइरह्यो भने ती दीर्घ कोभिडका लक्षण हुन सक्छन् । बेलायत र स्विडेनका गरी ४० हजार संक्रमितलाई सहभागी गराएर भएको खोजमा २० प्रतिशत व्यक्तिले एक महिनासम्म पनि पूरा निको नभएको अनुभव सुनाएका थिए । १ सय ९० जनाले आठदेखि १० सातासम्म लगातार संक्रमणका लक्षण देखापरेको र १ सय जनाले दस सातासम्म पनि बिरामी महसुस भएको जानकारी दिएका थिए ।
लामो समयसम्म थकान महसुस हुने, मांसपेसी र शरीर दुख्ने, ध्यान केन्द्रित गर्न गाह्रो हुनेजस्ता लक्षणलाई पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भनिन्छ
दीर्घ कोभिड हुदाँका चार भिन्न समस्या : नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ रिसर्चको विवरणमा संक्रमणको दीर्घ प्रभावका कारण मानिसहरू चार भिन्न समस्या पारिरहेको छ । निरन्तर लक्षण देखिइरहेकालाई थप सहयोग र उपचार गर्नेमा जानकारीको जरुरी रहेको बताएको छ । जीवन बदल्ने अनुभव अधिकांश मानिसमा सामान्य संक्रमण भएको दुई सातामा ठीक हुने र अलि गम्भीर संक्रमण भएकामा तीन सातामा ठीक भएको देखिन्छ । तथापि, रिर्पाेटमा हजारौं निरन्तरको कोभिडबाट ग्रस्त भएका छन् र बेलायतमा संक्रमित वृद्धि हँुदै जाँदा दीर्घ कोभिड व्यहोर्नेको संख्या पनि बढ्ने देखिन्छ । निरन्तरको लक्षणले श्वासप्रश्वासमा कठिनाइदेखि लिएर मस्तिष्क, मुटु तथा कार्डियोभ्यास्कुलर प्रणाली, आन्द्रा, कलेजो, मिर्गाैला र छालासम्म प्रभाव पारिरहेका छन् । जसमा सामान्य लक्षण भई पीसीआर पनि नगरेकादेखि लामो समय अस्पतालमा बिताएका हुन्छन् । कतिपय मानिसमा जसलाई कोभिड भएको पत्ता नै छैन, तिनमा दीर्घ प्रभाव हप्तांैसम्म भेन्टिलेटरको सहारामा बाँचेकामा भन्दा पनि ज्यादा देखिएका छन् ।
पोस्ट कोभिड : खोजहरूमा कोभिडमुक्त भइसकेकामा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या, जोर्नीको दुखाइ, मांसपेसीको दुखाइ, रिगंटा लाग्ने, भ्रम, आँखाको दृष्टिमा परिवर्तन, तनाव र डिप्रेसनजस्ता समस्याहरू देखिने गरेका छन् । लामो समयसम्म थकान महसुुस, मांसपेसी र शरीर दुख्ने, ध्यान केन्द्रित गर्न गाह्रोजस्ता लक्षण भने लामो समयसम्म रहेका छन् । जसलाई पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भनिएको छ ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको खोजमा संक्रमण भएको दुईदेखि तीन महिनासम्म पनि असर देखिइरहेको छ । संक्रमणबाट मुक्त भइसकेका ६४ प्रतिशत व्यक्तिलाई निकै समयसम्म कोरोनाको असर । वास्ना लिन गाह्रो, थकान, बेचैनी र डिप्रेसनजस्ता लक्षण भइरहेको देखाएको छ । ५५ प्रतिशतमा थकानको समस्या छ ।
संक्रमणमुक्त भए पनि संक्रमणको समयमा प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हुने, शरीर सुन्निने, मस्तिष्क वा मेरुदण्डमा प्रत्यक्ष असर हुने भएको पछिसम्म प्रतिकुल असर देखिन सक्छ । जसले थकान महसुस भइरहन सक्छ । पोस्ट ट्रम्याटिक असरका रूपमा पनि रहिरहन सक्छ । दीर्घ रोगीहरू मधुमेह, मोटोपना आदि समस्या भएकामा संक्रमण निको भइसकेपश्चात् पनि अन्य समस्या देखिन सक्छ । कति असर पारेको हो । त्यसअनुसार सिन्ड्रोम देखिन पनि सक्छ ।
निको भएकामा पल्मोनरी फाइब्रोसिसको जोखिम
हुन त फोक्सोलाई संक्रमण गर्ने भाइरस हो । कोभिड संक्रमणबाट निको भएकामा पल्मोनरी फाईब्रोसिससँगै फोक्सोसम्बन्धी अन्य समस्याहरू देखिन थालेका रिर्पाेटहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । संक्रमणअघि फोक्सोसम्बन्धी कुनै समस्या नभएकामा यस्तो देखिन थालेपछि सक्रमणका बेला भएको निमोनियाको असर लामोसमय रहने गर्दछ कि भन्ने त्रास उत्पन्न भएको छ ।
फोक्सोमा भएका कोषिकामा दाग पैदा भई हावा थैलीहरू बाक्लो र कडा हुन्छन् । फोक्सोबाट रक्त प्रवाहमा अक्सिजनको मात्रा कम गर्ने हुदाँ हिँडदा, व्यायाम गर्दा सास फेर्न कठिनाइ हुने अवस्था पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो । मधुमेह, रक्तचापलगायतका दीर्घरोग जस्तै : पल्मोनरी फाइब्रोसिसको पनि पूर्ण उपचार गर्न सकिँदैन । यसका लक्षणअनुसार उपचार र जीवनशैली परिवर्तनका माध्यमबाट सुधार ल्याउन सकिन्छ । अध्ययनमा कोभिडका कारण जटिल स्वास्थ्य अवस्था भएका ४० प्रतिशत बढीमा फोक्सो सुन्निने र तीव्र श्वासप्रश्वासको समस्या देखिएको छ । संक्रमित वयस्कहरू यसबाट बढी प्रभावित छन् । यसलाई दीर्घकालीन असरका रूपमा हेरिँदै छ । कोभिडबाहेक अत्यधिक धुम्रपान, कडा निमोनियाको उपचार, एन्टिइन्फलामेटरी मेडिकेसन, अटोइम्युन रोग, रेडिएसन र विभिन्न अन्य संक्रमणका कारणले पल्मोनरी फाइब्रोसिस हुने गर्छ । व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्थाअनुसार लक्षण फरकफरक भए पनि कोभिडबाट निको भएकामा एउटै लक्षणहरू श्वासप्रश्वासमा समस्या, सुक्खा खोकी, थकान, आंैलाको छालामा समस्या देखिने गरेको अध्ययनमा छ ।
श्रवणशक्ति नष्ट र मानसिक समस्या
बेलायतको युनिभर्सिटी कलेज अफ लन्डनको अध्ययनमा कोभिड–१९ को संक्रमणले सुन्ने क्षमतालाई कम वा पूर्ण रूपमा समाप्त पारिदिन सक्ने बताएको छ । संक्रमणपश्चात् स्टेरोइड औषधि दिइँदा बहिरोपनाको रूपमा देखिन्छ । सुन्ने क्षमता घट्नु र टिनिटस अर्थात् कानमा आवाज गुञ्जिनुको लक्षण पनि कोरोना र फ्लुका बिरामीमा देखिन सक्छ । त्यस्तै बेलायतको एक खोजमा कोभिड संक्रमणबाट निको भएका २० प्रतिशतमा मानसिक समस्या देखिने गरेको छ । एन्जाइटी, डिप्रेसन र अनिद्रा अत्यधिकमा देखिने गरेको खोजले बताएको छ ।
यावत् लक्षणहरू १. फोक्सो र मुटुमा भएका स्थायी क्षति २. सघन उपचारपश्चात् उत्पन्न हुने समस्या ३. भाइरल संक्रमणपश्चात् हुने थकाइको समस्या ४. निरन्तर कोभिड–१९ का लक्षणहरूका समस्या र ५. भिन्न समस्याका कारण भएको हुन सक्छ ।
अन्त्यमा, रिर्पाेट नेगेटिभ आउनेबित्तिकै अर्थात् संक्रमण पुष्टि भएको दुई साता सकिने बित्तिकै पहिलेजस्तै दैनिक कार्यमा सक्रिय भइहाल्न हँुदैन किनभने त्यसले थकान उत्पन्न गराउने र त्यो पछि गएर झन् जटिल बन्ने बताइन्छ । उक्त अवधिमा पोषिलो खानेकुरा सेवन गर्दे योगासन गर्ने, स्वास्थ्य बलियो बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । नियमित खाने गरेका औषधि छुटाउनहँुदैन ।
एस्काभेटरले बाटो खनेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्षलाई १ लाख जरिबाना
चुरे मकवानपुर । सडक निर्माणको क्रममा बातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन नगरी एस्काभेटर लगाएपछि मकवानपुरको एक गाउँपालिकाका अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकृत, सडक निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष तथा...
अछामी होली होइन होरी
हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले फागु पूर्णिमाका दिन आ–आफ्नो कला संस्कृति मुल्य मान्यताअनुसार एक आपसमा विभिन्न रङ्गी विरङ कलर दलेर होली पर्व मनाउने परम्परा छ । यो...
प्रदेश ६ Sushila Bishwokarma - October 18, 2020 0
गोरखा । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले नेपाली काँग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न नसकेको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियनले आज यहाँ आयोजना गरेको...
२०७७ साउन महिनामै पार्टीभित्र ‘धोबीघाट’को रिहर्सल पुनारावृत्ति हुन थालेको हामीले चर्चा गर्दा धेरैले आलोचना गरेको संझना हुन्छ । खासमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी...